DHAGEYSO:Xukuumadda Soomaaliya oo musharaxiinta ku eedaysay inay xaalad dalka ka abuurayaan | Star FM
Home Wararka Soomaaliya DHAGEYSO:Xukuumadda Soomaaliya oo musharaxiinta ku eedaysay inay xaalad dalka ka abuurayaan
DHAGEYSO:Xukuumadda Soomaaliya oo musharaxiinta ku eedaysay inay xaalad dalka ka abuurayaan
Warka ka Soo baxay Xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in hadalkii shalay ka soo yeeray Xubnaha Midowga Musharaxiinta Soomaaliya uu ahaa mid uga sii Daraya Xaaladda hadda uu dalkaasi marayo.
Waxaa ay sheegtay in sababta dib u dhaca doorashada Soomaaliya ay leeyihiin qaar ka mid ah Maamul goboleedyada dalka ka jira.
Afhayeenka Xukuumadda Soomaaliya Maxamad Ibraahim Macalimuu oo la hadlay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa sheegay in shirarkii isdaba jooga ahaa ee dalka lagu qabtay dhamaantooda ay dhiciseeyeen qaar ka mid ah hoggaanka Maamul goboleedyada,taasoo ay ugu talagaleen sida uu sheegay in madaxda dowladda dhexe lagu riixo in wakhtiga laga idleeyo.
Talaabadaas ayuuna Afhayeenka Xukuumadda sheegay inay keentay caqabado badan oo baajiyay in doorashada wakhtigeeda lagu qabto.
Xubnaha Mucaaradka oo si joogta ah madaxda dowladda ugu eedaynaya inay leeyihiin Mas’uuliyadda dib u dhaca doorashada ayuu afhayeenka Xukuumaddu sheegay in looga baahan yahay inaysan madaxda dowladda dhexe bas la eedayn maadaama hoggaamiyeyaasha maamullada qaarkood ay qayb ku laheeyeen sida uu xusay in doorashadu dib u dhacdo lagana shaqeeyo daganaanshaha wadanka ayadoo laga fogaanayo in xaalad la abuuro.
Dhinaca kale Madaxweynihii Hore ee dowladdii KMG Soomaaliya kana mid ah Xubnaha Midowga Musharaxiinta Soomaaliya Sh Shariif Sh Axmed ayaa sheegay inuu ka digayo in Ciidanka Q alabka sida ee Soomaaliya loo isticmaalo siyaabo aan haboonayn oo dhibaato ka dhalankarto sida uu sheegay.
Sh Shariif ayaa sheegay inay dambiyo ka dhalan karaan sida uu Tilmaamay hadii Ciidamada iyo Saraakiishoodu ay u hoggaansamaan amarro aan sax ahayn oo uga yimaada madax uu muddo Xileedkooda dhamaaday sida uu Xusay.
Previous articleGolayaasha ismaamullada oo maanta loo bandhigaya BBI
Next articleNew Zealand oo hakinaysa xiriirkii kala dhexeyay Myanmar